जहाँ हिराको वर्षा हुन्छ !
यस्ता छन् मुकेश अम्बानीका सबैभन्दा महङ्गा ११ सम्पत्तिहरु जसबारे कमैलाई थाहा छ
कहिल्यै यस्ता अनौठा घरहरु देख्नु भएको छ ?
भवन कस्तो हुनुपर्छ ? तपाईलाई के लाग्छ ? विश्वका विभिन्न कुनमा रहेका इन्जिनियरहरुले केही यस्तै नौलो काम देखाएका छन् । उनीहरुको मास्टरमाइण्डका कारण उनीहरु तथा